TRUESTORY: ဆိုတေးအား ထိုင်းတွင်ဆေးကုသမှုခံယူရန် ၄င်း၏ဇနီးမှ တာဝန်ယူပေးမည်ဟုဆို
ဆိုတေးအား ထိုင်းတွင်ဆေးကုသမှုခံယူရန် ၄င်း၏ဇနီးမှ တာဝန်ယူပေးမည်ဟုဆို
ကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်မှုကြောင့်မန္တလေးဆေးရုံတွင်တေးကုသမှုခံယူနေရသောတေးသံရှင်ဆိုတေး၏အခြေအနေမှာမသက်သာပါက ထိုင်းနိုင်ငံရှိဆေးရုံ၌ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ရေး အတွက် ၄င်း၏ဇနီးဆိုသူ မချိုချို(ခ) Cream က တာဝန် ယူကုသပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။၄င်းနှင့်ဆိုတေး(ခ)အောင်သ က်ပိုင်တို.မှာ မြ ၀တီမြို. တွင်တွေ.ဆုံချစ်ကြိုက်ကာထိုင်းနိုင်ငံ၊ဘန်ကောက်မြို.တွင်အတူပေါင်းသင်းနေ ထိုင်ခဲ.ခြင်းဖြစ် ပြီး ဇွန်လ အတွင်းကဆိုတေးမှ ၄င်း၏ ဇနီးဆိုသူအား၎င်း၏မိသားစုဝင်များနှင့်တွေ. ဆုံပေးခဲ.ကြောင်း၊ ထိုနောက်ဇူလိူင်လ(၄)ရက်နေ.တွင်၎င်းတို.နှစ်ဦးသည်ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဘန်ကောက်ရှိ၎င်းဇနီးဟု ဆိုသော အမျိုးသမီးနှင့်အတူသွားရောက်နေထိုင်ခဲ.ကြကြောင်း၊ထို.နောက်ဆိုတေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌၄င်း လက်ခံထားသောရှိုးပွဲရှိသည်ဟုဆိုကာ၎င်းမှဘန်ကောက်မှရန်ကုန်သို.လေယာဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၄င်း၏အမျိုးသမီးဖြစ်သူကမဲဆောက်မှ ရန်ကုန်သို.လည်းကောင်းဇူလိုင်(၁၀)ရက်နေ. တွင်ရောက်ရှိ ခဲ.ကြကြောင်း၊၄င်းနောက်ဆိုတေးမှ၎င်း၏အမျိုးသမီးဖြစ်သူအားရန်ကုန်ရှိဟိုတယ်တစ်ခုတွင်ခေတ္တ ထားခဲ.ကာပုဂံမြို.တွင်ရှိုးပွဲရှိ သည်ဟုဆိုကာဇူလိုင်လ(၁၄)ရက်နေ.တွင် တောင်သာမြို.သိုရန်ကုန်-
မန္တလေးအမြန်လမ်းမှသွားရောက်စဉ်ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ် ပွားခဲ.ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်း၏အမျိုး သမီးဖြစ်သူ ဟုဆိုသူ မချိုချို(ခ) Cream ကပြောသည်။ ကျွန်မ သူကားမှောက်တယ်လို. သတင်းကြား ကြား ချင်းမန္တလေးဆေးရုံကိုလိုက်သွားပေမဲ. သူမိသားစုတွေကကျွန်မကိုသူနဲ.တွေ.ခွင့် မပေးခဲ.တဲ. အပြင်ကျွန်မတို.နှစ်ယောက်ရဲ. စ္စကိုဘယ်သူမျမသိအောင်နေပေးဖို.သူ.အစ်ကိုကပြောခဲ.တယ်။
နောက်ထပ်သိရတာက သူနဲ.အတူပါသွားပြီးဆုံးသွားတဲ.မိန်းကလေးက အရင်ကျွန်မနဲ.စတွေ.စဉ် တုန်းက ပါလာခဲ .ပေမဲ. သူကို.မေးကြည့်တော့သူကသူနဲ.ဘာမှ မပတ်သတ်ဘူးလို .ပြောခဲ.ပြီး ကျွန်မ ကို ချစ်ရေးဆိုခဲ. လို. သူ.အချစ်ကိုလက်ခံခဲ.ပြီးအတူပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ.တာ။နောက်ပြီးဒီ ကိစ္စကို သူမိသားစုတွေလည်းသိတယ်။အခုသတင်းတွေထွက်တော့သေဆုံးသွားတဲ.မိန်းကလေးကသူ.ဇနီးဆိုပြီးသတင်းတွေ ထွက်နေတာနဲ .ကျွန်မအပေါ်သူမိသားစုက ဆက်ဆံတာမကြိုက်လို. အခုလိုပြောရတာပါ။ဟု ၄င်းက ဆို သည်။ ထို.အပြင် မန္တလေးဆေးရုံသို.ဆိုတေး၏အခြေအနေအားကြည့်ရန်သွားရောက်စဉ် ၄င်း၏ အကို ဖြစ်သူ ကိုဇာနည်ဆိုသူမှဆိုတေးနှင့်ပတ်သတ်သောကိစ္စများအားအခြားမည်သူကိုမှ မပြော ရန်ပြော ဆိုခဲ.သည်ဟုသူမကထပ်မံပြောသည်။ ကျွန်မအနေနဲ.ဆိုတေးကိုတကယ်ချစ်ခဲ.တာပါ။သူ ဘာသာကျွန်မအပေါ်ဘယ်လိုပဲလိမ်လိမ်ကျွန်မအနေနဲ.သူ.အပေါ်မှာစိတ်ဆိုးမိသလိုအရမ်းလည်းသ နားမိတယ်။.အပေါ်ထားတဲ. အချစ်တွေလည်းပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုမန္တလေးဆေး၇ုံမှာ သူ.အခြေအနေမကောင်းရင်ဘန်ကောက်ကဆေးရုံမှာသူရောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားတဲ.အထိဆေး ကုပေး သွား ဖို.အထိစီစဉ် ထား တယ်ဟု၎င်းကထပ်လောင်းပြောသည်။ အဆိုပါသတင်းနှင့်ပတ် သတ်၍တေးသံရှင်ဆိုတေး၏ဇနီးဖြစ်သူဟုဆိုသောမချိုချို(ခ)Cream၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ် ပြီးအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက၄င်းအားဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြပါသည်။အထက်ပါသတင်းတွင်ဖောပြ ထားသောဓာတ်ပုံများမှာလည်းကာယကံရှင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းအသိပေး အပ်ပါသည်။
တေးသံရှင်ဆိုတေးနှင့်၎င်း၏ဇနီးဆိုသော မချိုချို တို.ကားအက်ဆီဒင့်မဖြစ်မှီယခုနှစ်ဇူလိုင် လ အ တွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်တွင်အမှတ်တရရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံအချို.
Posted by TRUE STORY at 2:27 PM
အပျိုစင်ဘ၀ကို ရောင်းချခဲ့သော်လည်းဘရာဇီးမိန်းကလေး အ...
ဘောလုံးသံတမန် မြန်မာ့အလှမယ် နန်းခင်ဇေယျာ၏ လှုပ်ရှားမှု
PRE 27 TH SEA GAMES, TEST MATCH
ကလေးပြည့်တန်ဆာ ၁၀၀ ကျော် FBI ကယ်တင်
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကုန်းတွင်းနှင့် ကမ်းလွန...
၄၉ လမ်းထောင့် တိုက်ခေါင်မိုးထပ်က ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်...
သာမန် နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးသည် နောင်လာမည့် ရွေး...
ပြည်သူများ၏ ပေးစာများအား အရေးယူ ဆောင်ရွက်ချက်များက...
သမ္မတခရီးစဉ်၏ ရလာဒ်တစ်ခုကြောင့် ဗြိတိန်-မြန်မာ ပူးတ...
ပင်လယ်ရေအောက် ဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်း ပြင်ဆင်မှုပြီးစီး
နေပြည်တော်တွင် အမေရိကန်ဟိုတယ်သစ် ဖွင့်မည်
သူတို့ရေးထားတာတွေက မှန်ချင်မှမှန်လိမ့်မည်။ တုန့်...
ကမ္ဘာ့အဆင့် သချာင်္ပြိုင်ပွဲ SASMO တွင် ရွှေတံဆိပ်ရကျေ...
SKYNET ရုပ်သံမှ Package (၄) မျိုးခွဲပြီး ရောင်းချေ...
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး အယောင်ဆောင်ပြီး ငွေကျပ် ၅၁ သိန်း...
မြ၀တီတွင် သုံးနှစ်အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး ရေလွှမ်းမိုး...
Sexy ဓာတ်ပုံတွေကြီးပဲရိုက်လေ့ရှိတဲ့ ဇွန်သင်းဇာ ရဲ့...
ABSDF မြောက်ပိုင်း ပါဂျောင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူ...
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော်(၂၀၁၃)သို့နိုင်ငံတော...
ဇူလိုင် ၃၁ ရက် ခန့်တွင် အင်တာနက် လိုင်းများပြန်လည်...
ငွေကျပ် ၁၅၀၀ တန် မိုဘိုင်းဖုန်းများ Ringtune များထ...
မန္တလေးမြို့ရှိ ရတနာပုံခေတ်နှောင်းပိုင်းလက်ရာ သီပေါ...
အခေါက်ရွှေဈေး ၇ သိန်း ၀န်းကျင်အထိ ပြ န်လည်မြင့်တက်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဆိုလာစနစ်သုံး အားကစားကွင်းကြီး
“နှင်းဆီခရီးသွား မှတ်တမ်းများ” အစီအစဉ်ကို မြဝတီဒစ်...
နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံကလည...
ရက်လွန် ၁၅၀၀တန် Sim Card များသက်တမ်းတိုးလျှောက်ထား...
နောက်ကြောင်းပြန် လှည့်ရန်နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်နေသ...
Let Yay Ta Pyin Tee.mp4
အသားပုပ်နံ့ထွက်သည့် အင်ဒိုနီးရှားမှ ထူးဆန်းသော ပန်...
ကျေးရွာပေါင်း ခြောက်သောင်းကို ကျပ်ဘီလီယံ သုံးရာခန်...
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသတွင် မိုးခေါင် ရေရှားမှု...
အလုပ်သမားရပိုင်ခွင့် စာစောင် လွှတ်တော်က ထုတ်ဝေမည်
မြန်မာ့ ပြောင်းလဲမှု အားကောင်းဟု ဘန်ကီမွန်း သုံးသပ်
ငါးမွှာပူး မွေးမည့် မိခင်
ရန်ကုန်မြို့ ၌ အဆင့်မြင့်ဘတ်စ်ကား ပြေးဆွဲသည့် BRT ...
သမ္မတ ကတိအတိုင်း နိုင်/ကျဉ်းများကို စလွှတ်ပေးပြီ
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်၌ တက်ရောက်ခွင့်ရမည့် ထူ...
မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်တစ်လျှောက် လမ်းကြောင်းပေါင်း ၄...
မရိုးနိုင်တဲ့ဖက်ရှင်နဲ့ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင်
ဗုဒ္ဓဂါယာကို ဗုံးနှင့်တိုက်ခိုက်၍ ကော့စ်ဘဇားတွင် ဘာ...
ပင်လယ်ရေအောက်ဖိုင်ဘာကေဘယ် (SEA-ME-WE 3) ဆက်ကြောင်း...
အာဇာနည်နေ့တွင် မစ်စစ် အဲရစ် (ခေါ် ) ဒေါ်စု၏ ဖြစ်အင်
ကမ္ဘာ့အဆင့်သင်္ချာပြိုင်ပွဲ မြန်မာကျောင်းသားရှစ်ဦးေ...
27th SEA Games Mascot Animation
ဆိုတေးဇနီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုလာသူ ချိုချိုနဲ့ ပတ်သက်သည့်...
ဘဏ်အချင်းချင်း နိုင်ငံခြားငွေ ရောင်းဝယ်သည့်စနစ် သြ...
အဆိုတော်ဆိုတေး သတိပြန်ရလာတဲ့အချိန် မိမိကို သူ့ဇနီး...
ဆရာတော်ဦးဝီရသူကိုယ်တိုင် ရှယ်ထားတဲ့သတင်းမိုလို့ ဗံ...
အာဇာနည်နေ့ နှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အပေါ် တ...
စယ်လီဗစ်တီတွေရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းကြီးကို မကြည်...
ချစ်တာပဓာန ( ဆို - ဟေမာနေ၀င်း)
◆လက်ကိုင်ဖုန်းဘက်ထရီ ကြာရှည်ခံတဲ့နည်းလေး လုပ်ကြည့်...
တယ်လီနောဝန်ထမ်း သြဂုတ်လတွင် စခေါ်မည်
ဖုန်းကံစမ်းမဲပေါက်ကြောင်း လိမ်လည်ငွေတောင်းခံသူ မျာ...
မျိုးစောင့် ဥပဒေ ပြဌာန်းရေး ထောက်ခံ လက်မှတ် ၂ သန်း...
ကိုင်ဇာ - ကစ္ဆပနဒီလှိုင်းသံ
ဘင်္ဂလီခေါင်းဆောင် ကျော်မြင့်အတွက် NLD က ဦးလှမျိုြး...
နယ်စပ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးနိုင် မည့် လုံခြုံရေး တပ်...
နန်းထိုက်တော်ဝင်စားသောက်ဆိုက်ပိုင်ရှင်က unity jour...
၂၀၁၅ အတွက် မစဉ်းစားနိုင်သေးသည့် သမ္မတကြီး
ထိုင်းမှ သက်တမ်း အရင့်ဆုံး ဟွာဆင် ဟန်းရွှေဆိုင် လာဖ...
ဘွဲ့လက်မှတ်တုဖြင့် Work Permit လျှောက်ထားသူ မြန်မာ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျိုးစုသမိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာလုံးဝ...
ဆိုတေးအား ထိုင်းတွင်ဆေးကုသမှုခံယူရန် ၄င်း၏ဇနီးမှ တာ...
ဆိုတေး နှစ်ရက်အတွင်း သတိပြန်မရပါက ဘန်ကောက်တွင် ကုသမည်
သက်မွန်မြင့် - သေသေချာချာမသိဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံကို နှ...
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် သင်္ချိုင်းနေရာဟောင်း မနုဿဗေဒပညာရှ...
ယာဉ်ထိန်းရဲ ဝတ်စုံဝတ်ပြီး ကမိလို့ တရားစွဲခံရသူ အာမ...
ကေတီဗွီအချို့ ပါတီအမည်ခံ ဖွင့်ထားကြောင်း တာဝန်ရှိသ...
မြန်မာပြည်ကိုချစ်ပါ (Myanmar Christian Song)
သုမောင် - လူချွန်လူကောင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် လူမှုရေး၊ စီးပ...
ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ဆန်တန်ချိန် သုံးသန်း တင...
နန်းသီရိမောင် နှင့် မာဂျေ - ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရခြင်း
ရခိုင်ပြည်အား ဘင်္ဂလီနိုင်ငံထူထောင်ရန် စီမံကိန်းရေးဆ...
ပွင့်လင်းရာသီကာလမှ စတင်ကာ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင...
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပေါ်တွင် မသင်္ကာဖွယ် လူတဦးကို ဖမ်း
ဇူလိုင်အတွက် GSM မိုဘိုင်းဖုန်း ၂၅ ရက်တွင် ချထားပေ...
အနုပညာရှင်ဆိုတာ ဝတ်ချင်တိုင်းဝတ်လို့ မရဘူးဆိုတဲ့ ခ...
လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုများ တိုင်ကြားနိုင်ပြီ